လည်ချောင်းရောင်နှင့်သွေးနမူနာများအကြားခြားနားချက် - Ningbo Hema Scientific Instrument Co. , Ltd.
နေအိမ် > > လည်ချောင်းရောင်နှင့်သွေးနမူနာတစ်ခုအကြားခြားနားချက်
COVID-19 ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်လက်ရှိနည်းစနစ်များတွင်ဘူကလီအက်ဆစ်စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အဆုတ် CT ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုစစ်ဆေးခြင်းအသစ်နဲ့ဘာကွာခြားသလဲလည်ချောင်း swabနှင့်သွေးဆွဲ? အတူတူကြည့်ကြရအောင်
coronavirus အသစ်စမ်းသပ်ခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့် nucleic acid acid နှင့် (blood) antibody testing: နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်လက်တွေ့ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင်စမ်းသပ်သူတစ် ဦး သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ရောဂါ၏အဆင့်ဆင့်နှင့်ကူးစက်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်ခုအားပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ပန်း ဦး ရစ်သရဖူ nucleic acid စမ်းသပ်မှုအသစ်အတွက်နမူနာများကိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းမှထုတ်ပေးသည်။ လူနာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များရှိ ribonucleic acid (RNA) ဗိုင်းရပ်စ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုရှိမရှိသိရှိရန်စစ်ဆေးသည်။ သွေးနမူနာများကိုလူနာ၏သွေးမှကောက်ယူသည်။ ၎င်းသည်လူနာ၏သွေးထဲတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ပantibိပစ္စည်းရှိမရှိသိရန်နှင့်လူနာသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ရောဂါ၏အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်ကူးစက်သည်မဟုတ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန် antibody ကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ Nucleic acid အကောင်းမြင်သည်ဗိုင်းရပ်စ် ၀ င်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ် ၀ င်လေလေ၊ ဘူမိအက်စစ်အပြုသဘောဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နျူကလိစ်အက်ဆစ်ကိုရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၁ ရက်မှ ၂ ရက်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ရောဂါသည်မည်သည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါစေသွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့်ကုသမှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Coronavirus အသစ်အတွက်ပုံမှန်သွေးစစ်ဆေးခြင်းကဆရာဝန်တွေကိုဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုပထမဆုံးခွဲခြားသိမြင်စေပါတယ်။ လူနာ၏ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်လျှော့ထားသောသွေးဖြူဥအရေအတွက်နှင့် Lymphocyte အရေအတွက်လျော့နည်းသွားပါက၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ပြီးလူနာ၏ကပ်ရောဂါနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်ရောဂါနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်နိုင်သည် လူနာသည် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ခြင်းရှိမရှိနောက်ဆက်တွဲဗိုင်းရပ်စ်နျူကလိစ်အက်ဆစ်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအမှု၌သွေးစစ်ဆေးခြင်းသည် coronavirus သစ်ကိုစစ်ဆေးရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။
The new coronavirus nucleic acid test results are an important reference for the diagnosis and efficacy evaluation of new coronavirus pneumonia. Nucleic acid test screening samples are mostly derived from deep cough sputum or throat swabs. Because the oropharyngeal swab can be operated by opening the mouth, it is relatively simple, so it is more commonly used clinically. However, if the collection ofလည်ချောင်း swabnucleic acid test specimens is not standardized, it may cause "false negative" results and cause delays in treatment. Therefore, nucleic acid and blood drawn antibody tests need to complement each other to confirm whether infection has occurred and the status of the patient.
လွန်ခဲ့သော:မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည် # COVID 19 #
နောက်တစ်ခု:မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?